आभूषण उडमर्ट: गोप्य साइन मान्छे (फोटो)
इतिहासकारहरूले लागि उडमर्ट यो असाधारण र मूल मान्छे को अध्ययन को एक inexhaustible स्रोत प्रतिनिधित्व आभूषण। परम्परा, संस्कृति, दैनिक वस्तुहरु: सबै मालिकको आफ्नो प्राण ढाँचाको राख्नु पछि, तिनीहरूले घेरिएको सबै प्रदर्शित छन्। को आभूषण राम्ररी एक राष्ट्रको रूपमा Udmurts, आफ्नो बन्द जंगल जीवन र काम को peculiarities संग intertwined छ।
उडमर्ट आभूषण एकल राष्ट्रको उपस्थिति अघि लामो उत्पत्ति। प्रारम्भिक 19 शताब्दीयौंदेखि - तर यो केवल लेट 18 मा सुरु अध्ययन। को पहिले अवधिको प्रतिहरू लगभग बाँच्न थिएन। पहिलो अनुसन्धानकर्ताहरूले उडमर्ट संस्कृति विशेषताहरु को कपडे उज्ज्वल रसदार रंग हेर्न असामान्य थियो। लगभग सबै उडमर्ट ढाँचाहरू र रातो वा कालो मुद्दा, खैरो वा सुन गरे गहने।
variegated रंग को predominance सजिलै व्याख्या गर्न सकिन्छ। Udmurts को backwoods मा एक बन्द जीवन बस्थे। प्रकाश को कमी, तिनीहरूले आफ्नो रेखाचित्रमा embody। रंग को ताल, को आन्दोलन ढाँचाको दिन्छ जीवन र आनन्द तिनीहरूलाई भरिन्छ।
गहने को मनसाय
हीरे, ट्यूटोरियल, वर्गहरूको: ऊन तौलिया मा सबै भन्दा साधारण सरल ज्यामितियआकार छन्। पछि आभूषण उडमर्ट पहिले नै फूल छ। युक्रेनी संस्कृति को प्रभाव को वृद्धि कारण रातो पप्पिज, गुलाब र अन्य बिरुवाहरु को उपस्थिति।
सबैभन्दा कढाई छाँयामा साधारण जलपक्षी। यो तत्व यूराल थुप्रै देशहरुमा वर्तमान छ। यसले सम्बन्धित एक प्राचीन मिथक। यो चरा सागर तलामा डुबुल्की मार्न र भूमि को एक टुक्रा त्यहाँ देशमा थियो, जो धेरै शताब्दीयौंदेखि पहिले ल्याउन सक्छ भनेर भन्छन्।
जलपक्षी को नमूना आवश्यक विवाह स्लिभ शर्ट केटी मा प्रस्तुत। पछि, उहाँले एक धुनमा को पखेटा जस्तो गर्न थाले।
फूल प्रतीकात्मक रूप
धेरै मानिसहरू जस्तै Udmurts तीन-भाग को दुनिया कल्पना। स्वर्ग, पृथ्वी र underworld: आफ्नो विश्वास अनुसार, संसारको निर्माता INMAR तीन भागमा ब्रह्माण्डको विभाजित। रातो रगत, जीवन र सूर्य embodied कि - आकाश सेतो रङ, पृथ्वी सङ्केत। र Underworld - कालो छ। पछि, यो उडमर्ट गणतन्त्र झण्डा को प्रतीक को संयोजन मा गरियो।
उडमर्ट ढाँचा पूर्ण मान्छे संसारको बुझ्ने बाटो झल्काउँछ। उदाहरणका लागि, महिला अक्सर यो जस्तै राले कढाई: बीचमा त्यहाँ एउटा ठूलो थियो , रातो त्रिकोण यो कालो वा गाढा नीलो थियो मुनि। शीर्ष फरक ढाँचाको हल्का रंग संग कढाई।
संसारको रूखको छवि उडमर्ट राष्ट्रिय आभूषण characterizes। बासिन्दा मुख्य रूप वुडल्याण्ड Inhabited, यो धेरै रूखहरू सम्बन्धित कि छैन अचम्मको छ। त्यसैले, Udmurts मृत्यु पछि एक व्यक्ति रूख लागू गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्थे। मुकुट संग प्रत्येक बैरल यो कुरा वा उहाँलाई प्रार्थना गर्न सम्भव थियो उहाँलाई आफ्नो प्राण, थियो। सबैभन्दा Udmurts पूजा पाइन, सजाना, सन्टी र पहाड खरानी।
पछि, दुनिया रूख तिनीहरूको हातमा चित्रण गरिएको थियो प्रजनन देवी, को छवि गरियो। प्रत्येक पक्षमा आवश्यक पात शाखा चित्रण गरिएको। सूर्य आमा को उडमर्ट Shunde-Muma द्वारा भनिन्थ्यो र मात्र स्वर्गीय शरीर को संरक्षक थियो, तर भूमि प्रजनन लागि पनि जिम्मेवार।
उडमर्ट लोक आभूषण जनावरहरूको चित्र धेरै छन्। परंपरागत boars, भेडा, बनबिलाव, ईगल्स र Falcons कढाई। संस्कृति को विकास को पुराना चरणमा बाट सुरू हुने, उडमर्ट घोडा चित्रण। यो तौलिया मा कढाई थियो भने, यो विषय सुखी वैवाहिक यात्रा इच्छा को यात्रा मा साथ लिन निश्चित थियो, र दुलही कढाई घोडा को headdress मा।
अर्को लोकप्रिय तरिका एक भालु छ। यो अक्सर एक औंला बिना चित्रण गरिएको छ। यो परम्परा shamans को दफन संस्कार फिर्ता तिथिहरु। एक आदरणीय मानिस मरिरहेका गर्दा देवताहरूको आशिष् लागि परिवार मा भण्डारण थियो जो आफ्नो औंठी, कट।
सौर रूपांकनों र Swastika
उडमर्ट राम्ररी पर्म गर्न assimilated। यो अवधि देखि, उडमर्ट ढाँचा सौर मनसाय प्राप्त गर्न थाल्छ। पहिलो, सूर्य को विभिन्न तस्बिरहरू काठ नक्काशी, आभूषण बनाउन मा प्रयोग गरिन्छ र पछि कढाई हस्तान्तरण।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मनसाय सौर Swastika छ। यो तत्व उडमर्ट मा सहित विभिन्न देशहरुमा पाइन्छ। Swastika तौलिए, वस्त्र मा कढाई। त्यो सेवा एक सुरक्षा भूमिका रूपमा - दुष्टात्मा बन्द वार्ड - र पुनरुद्धार, नयाँ जीवनको जन्म, एक परिवार चाहनुभएको।
अनुसन्धानकर्ताहरूले मनसाय पहिचान "pityri" (बीचमा एक प्वाल एक सर्कल) र "pityres" (एक आभूषण एक सर्कल)। पहिलो नमुना शाल विवाह दुलही को एक अपरिहार्य तत्व थियो, र अन्य सधैं टोपी महिलाहरु मा उपस्थित थियो।
अझै पनि केही बान्की
आभूषण उडमर्ट धेरै कवितात्मक। यो मिथक र दन्त्यकथा सम्बन्धित आधारभूत विश्वास प्रर्दशन गर्दछ। कुनै कम कवितात्मक ध्वनि र धेरै अन्य विशेषता रूपांकनों। उदाहरणका लागि, एक इन्द्रेणी, स्वर्गीय शीत। जनावरहरूलाई सम्बन्धित ढाँचाको - हक, निशान बिरालो, एक भ्यागुतो टाउको।
विषमकोण अक्सर घरमा क्रम को इच्छा गर्न चित्रण। एक पङ्क्ति परिवारमा छोराहरू संख्या बारे जानकारी बोकेको धेरै lozenges। धन र समृद्धि प्रतीकको रूपमा केक नामित पछि embroideries को मनसाय मा हीरे।
अर्को बक्स त्यसपछि उहाँले हुन्छ, किरण साथ सिलना सकिएन सूर्य को प्रतीक। यो दुष्टात्मा, रोगहरूबाट र दुष्ट आँखा विरुद्ध जन्तरको एउटा अपरिहार्य तत्व थियो।
15 औं शताब्दीमा अर्को प्रवृत्ति लगाया जान सक्छ। चन्द्र - महिला bibs छ मा झन् स्पेस अर्को प्रतीक हो। त्यो जो वरिपरि हीरा आकारको रेज थिए आठ-चुच्चा तारा को रूप मा चित्रण गरिएको थियो। यस्तो चरित्र बिना यो विवाह मनाउन असम्भव थियो। साइन लुगा मा छैन भने रात को संरक्षक र जवान, बच्चाहरु हुनेछैन - यो चन्द्र कि विश्वास थियो।
काउली कस्तो छ? यो अद्भुत तरकारी को लाभ
बेलारुसी पिता फ्रस्ट। बेलारुसी पिता फ्रस्ट को ठेगाना
ठूलो रूस ... किन हाम्रो मान्छे बहुराष्ट्रीय भनिन्छ?
यसलाई विभिन्न धर्म मा एक स्वर्ग जस्तो देखिन्छ
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा Dostoevsky संग्रहालय: ठेगाना, समीक्षा
"Vagis" - घनिष्ठ स्वच्छता लागि जेल: समीक्षा, प्रयोगको लागि निर्देशन
सपना व्याख्या हेर: बाघ के सपना?
समूह "Yudi" - ब्रिटिश प्रतियोगिता को प्रतिभाशाली सदस्य
इस्टर लागि मूल र विशेष उपहार - अन्डा Papier-उसिनेको बनेको
परियोजना 971 - बहु-उद्देश्य आणविक पनडुब्बी जहाजहरू एक श्रृंखला: निर्दिष्टीकरण
"द अतुल्य दानव": अभिनेता र भूमिकाको
जीवन र लगानी आकर्षण को मामला मा रूसी क्षेत्रहरु दर्जा
ग्यारेन्टी बिजुली को आपूर्तिकर्ता - छ ... बिजुली आपूर्तिकर्ता सूची